Vaovao sy hetsika lehibe 3 ao amin'ny tontolon'ny GEO - Manomboka amin'ny 21 - Geofumadas
Vaovao sy hetsika lehibe 3 ao amin'ny tontolon'ny GEO - Manomboka amin'ny 21
Febroary, 2019 jeospatial - GIS, Engineering, fanavaozana
Bentley, Leica ary PlexEarth dia iray amin'ireo zava-baovao mahaliana indrindra manomboka amin'ny febroary 2019. Ho fanampin'izany, asehonay fa nanangona hetsika mahaliana 21 ho avy izahay, izay ahafahan'ny vondrom-piarahamonin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny geoengineering mandray anjara. Ny sasany amin'ireo lohahevitra noresahina tamin'ireto hetsika ireto dia: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, design, CAD ary koa IoT.
Anontanio ny Expert Expert - MicroStation CONNECT Edition
Izany dia natombok'i Bentley, ho toy ny safidy manan-danja ho an'ireo mpampiasa izay matetika mila toro-hevitra ivelan'ny fanampiana ara-teknika omen'ny boky na webinars amin'ny fampiharana. Izany fahatsiarovana tsy maintsy Izaho no nanaitra tamin'ny iray amin'ireo zava-mitranga ao Londres, indray rehefa cadastral rafitra iray any Amerika Afovoany te hifindra monina avy any Geographics mba BentleyMap napetraka ny fangatahana mandroso, more 4500 raki-daza amin DGN amin'ny ara-tantara versioning izay tokony handeha Oracle maka sary .
Raha fintinina, izy ireo dia fivoriana maimaim-poana antsoina hoe "Ask the Expert", amin'ny talata amin'ny 12 ora antoandro, ora atsinanana US ary 1 PM ora London.
Afaka miditra eto ianao, mba hahafantatra ireo olana izay ho avy.
Ohatra, ireo no lohahevitra izay horaisina amin'ny herinandro manaraka:
12-Feb configuración paramètres WorkSpaces and WorkSets amin'ny fampiharana CONNECT Edition
19-Feb Fampiharana migadra novolavolain'ny VBA, BMR ary MDL
26-Feb Cloud serivisy ho an'ny fampiharana CONNECT Edition
Ny goavana Leica Geosystems, dia niavaka nandritra ny taona maro ho iray amin'ireo andry amin'ny famoronana, fitantanana ary fanaraha-maso ireo haitao izay ampiasaina hatrizay, manomboka amin'ny sehatry ny geospatial, fiarovana, fiarovana, injeniera ka hatramin'ny fananganana. Tamin'ny 7 febroary dia nambara fa ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny SVAB, orinasa natokana ho an'ny fampandrosoana ny vokatra ho an'ny mpitrandraka -manomboka amin'ny fanaraha-maso, mankany amin'ny fitaovana sy ny fanaraha-maso-; Nahitam-bokany izany, samy nanolotra ny iray amin'ireo vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny milina, mifantoka amin'ny famokarana ny iXE3 sy iGW3. Ity vahaolana ity dia tsy inona fa ny rafitra miorina amin'ny fanekena ireo fitaovana Quantum SVAB.
Raha mahatsiaro, ny Leica iXE3 kisary dia rafitra izay mamela ny milina fanaraha-maso ao amin'ny 2D sy 3D avo marina tsara, amin'ny alalan'ny fanaraha-maso dia afaka mamorona tanety tontonana modely, manome manovaova any an-tsaha; Mandritra izany fotoana izany ny iGW3, dia tena andro toerany ny vary - ny excavator siny, hiova avy hatrany, ary tsy manamarina ny fandaniana fotoana marina leveling ireo.
Ny rafitra natolotr'i Leica + SVAB, dia ny Fikirakira ny Tool, tsy misy filalaovana izany - mifandray amin'ny Bluetooth Low Energy (BLE), ary manana ny fahafahana mamantatra hoe iza no fitaovana amin'ny milina izay ahafahan'ny processus fikarohana, ary koa manondro hoe iza ireo rafitra na fitaovana tafiditra ao anatin'ilay milina.
Ity rafitra vaovao ity dia tafiditra miaraka amin'ireo teknolojia efa nampiasaina taloha, ny iXE3 sy ny iGW3, izay midika ho fomba fitantanana bebe kokoa sy mahomby amin'ny milina indostrialy
Ny mpandraharaha sasany dia manova siny imbetsaka isan'andro; Miaraka amin'ny fanamafisana ny fahafantarana ny fitaovana, nesorina ny loza mety hitranga amin'ny hadisoan'ny olombelona. Ny fampidirana miaraka amin'ny vahaolana fanaraha-maso ny milina dia midika fa tsy mila mifantoka amin'ny tontonana iray fotsiny ny mpandraharaha
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ity rafitra ity dia ny fanamorana ny fizotran'ny fikirakirana ny milina, manala ny filàna manova ny toe-javatra amin'ny tanana. Ho fanampin'izany, manakana ny mpandraharaha rehetra (novice na manam-pahaizana) tsy hampiasa ny sifotra-angady tsy marina izy io, mamorona fandaniana fotoana sy famerimberenana ny fitrandrahana satria mifampiresaka ny rafitra - mandefa fampandrenesana izy raha misafidy fitaovana tsy misy modely fankatoavana fitaovana ny mpandraharaha. - ary mandeha ho azy tanteraka. Tombony iray hafa dia ny fanekena ireo fitaovana toy ny cubes mitongilana mahazatra sy ireo rotator mihodina azo esorina.
Ny rafi-paneken'ny fitaovana dia mametraka fitsipika vaovao iray izay manararaotra ny fampahalalana izay mampifandray ny fitaovana miasa amin'ny milina.
Antenainay, amin'ity lafiny ity, ny kalitaon'ity vokatra ity, tahaka ny nahatratraran'izy ireo nandritra ny tantaran'i Leica, nefa tsy noraharahiany ilay mpiara-mamorona azy SVAB, izay efa mpitarika tamin'ny fanomezana vokatra tao amin'io faritra io. hydraulics. Tsy ho ela dia ho hitantsika ny fampiharana an'ity rafitra ity sy ny tombontsoa entiny.
Ny ankamaroany mahalala an'i Plexscape amin'ny maha-mpamorona ilay antsoina hoe PlexEarth, iray amin'ireo fitaovana fototra ho an'ireo matihanina izay mampiasa ny rafitra CAD amin'ny endriny mahomby amin'ny tetikasa AEC (Architecture, Engineering and Construction). Plexscape dia nanao fifanekena tamin'ny TranSoft, ary fiaraha-miasa vaovao amin'ny Bird.i tsy mitsahatra ny manaitra anay; sehatra iray ahafahana miditra sy mandinika sary avy amin'ny zanabolana na zana-habakabaka, izay ahazoana angona avy amin'ireo lehibe sasany eo amin'ny sehatry ny sary toa ny: AIRBUS, Digital Globe, Bluesky, na planeta. Bird.i manambatra ny fidirana amin'ny sary miaraka amin'ny fizotran'ny faharanitan-tsaina, hahazoana angon-drakitra ara-jeografia avo lenta ho an'ny tsena sy ny fizotran'ny AEC.
Ilaina ny fampidirana ireo voalaza etsy ambony ireo, ho valin'ny zava-tsarotra rehetra mitranga, amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra izay misy sary miaraka amin'ny fizotran'ny jeôlineur; toy ny: fividianana sary avo lenta (avo lenta), fahadisoana amin'ny famolavolana, faharetana na fikarakarana amin'ny sary maimaim-poana miaraka amin'ny fetran'ny fampiasana, ny fahamalinana ambany na ny fahamendrehana.
Ao amin'ny Plexscape, manolo-tena ny hanova ny fomba fiasan'ny injeniera amin'ny tetikasam-panorenana, ny rafitra ary ny fanorenana (AEC) amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny elanelana misy eo amin'ny famolavolana sy ny tontolo tena izy. " hoy izy. Lambros Kaliakatsos, mpanorina sy CEO an'ny Plexscape.
PlexEarth sy Bird.i dia namorona mekanisma ka ny orinasa kely, salantsalany na lehibe, izay tantanana amin'ny sehatry ny fanorenana, solika, gazy, fitrandrahana, na angovo azo havaozina, dia afaka mampiasa sary zanabolana ao anatin'ny sehatra CAD toy ny AutoCAD . Ny fidirana ara-potoana amin'ny angona geospatial dia ahafahan'ny mpampiasa CAD mamorona angon-drakitra nohavaozina, tsara kokoa ary fanaraha-maso ny rafitra-habaka, haingana sy mora.
Mino mafy izahay fa ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Bird.i dia hamela ireo manam-pahaizana AEC hamolavola ny fahatokisan-tena lalina ary handray ny dingana manaraka amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana amin'ny votoaty avo lenta.
Ahoana no hitrangan'izany?
Eny, Bird.i voalohany izy mamoha miasa amin'ny fidirana amin'ny avo-end fitarafana, amin'ny lafiny iray hafa, dia fantatr'i PlexEarth, ny flagship ny Plexscape, dia midadasika fotodrafitrasa miorina amin'ny rahona sy ny besinimaro amin'ny alalan'ny fanehoana anjara Autodesk fitaovana, dia hanampy amin'ny cataloging, fizarana sy ny fifantenana ny sary izay mitaky manokana matihanina, ka tatỳ aoriana azo ampiasaina eo amin'ny famolavolana sy ny angona dingana fitantanana, mifototra amin'ny AEC.
Ity ny lisitr'ireo fisehoan-javatra voalaza teo aloha, mifidy ny iray amin'ny tombontsoanao ary hitondra anao any amin'ny pejy fanoratana.
24 Aprily - Fantaro ny tombontsoa avy amin'ny mapping rahona. Fantaro ny tombontsoa amin'ny fisoratana eo amin'ny rahona
20 Febroary- Famoronana tetikasa fifamoivoizana amin'ny ArcGIS. Famoronana asa fanaraha-maso fandrakofam-pahalalana amin'ny ArcGIS
12 Febroary - Atrikasa GIS: OpenUtilities - Febroary. SIG Atrikasa: OpenUtilities
12 Febroary - PostLIS dia ny famoahana ny famoahana ny olana ara-tsosialy. PostGIS Workflows populaires mba hanatsarana ny olana ara-pahaizana-Famahana
12 of February-GIS Workshop: Modeling ny tena zava-misy ho an'ny EMEA. SIG Ateliera: Modely ho an'ny EMEA
13 Febroary- GIS Workshop: OpenRoads - Febroary.
13 Febroary- SIG Atrikasa: rindrambaiko fandalinana ara-drafitra
27 Febroary - Fanavaozana vaovao momba ny modelim-pahaizana momba ny teknolojia jeospasy sy ny fahalalana tena ilaina momba ny GEOINT. Vaovao farany momba ny maodelim-pahaizan'ny teknolojia Geospatial sy ny vatan'ny fahalalana ilaina amin'ny GEOINT
27 of February- Famerenana ny famerenana ny famerenana an-tambazotra
28 febily- Ny làlan'ny fitaterana mahomby sy ny drafitra avo lenta miaraka amin'ny TBEST. Drafitr'asa momba ny fitaterana mivezivezy sy ny fiatoana amin'ny TBEST
March 7 - Jereo ny angon-drakitrao amin'ny endriny vaovao amin'ny fampiasana Gis 3d. Jereo ny angon-drakitrao amin'ny teboka vaovao amin'ny fampiasana 3d Gis
Martsa 13- Fampiasana ny fandinihana eto an-tany mba hanaraha-maso ny teti-bolan'ny rano ho an'ny fitantanana rano. Mampiasa fandinihana momba ny tany mba hanaraha-maso ny famatsian-drano ho an'ny Fitantanana ny basin-drano
16 tamin'ny Aprily- Ny fampisehoana ny data sy ny fandaharam-potoan-tserasera amin'ny fampiasana Surfer Data Visualization sy ny fandaharam-potoana amin'ny serivisy mampiasa Surfer
12 Febroary OpenRoads Designer: fanatsarana ny fiovana
From the 12 of February to the 9 of April - Introduction to the design of BIM 360. Fampidirana ny BIM 360 Design
14 Febroary - Vaovao momba ny sivana 3D sy ny Infraworks. Inona no Vaovao amin'ny 3D sy Infraworks sivily
19 ho an'ny Febroary Tech Talk: Fampahafantarana ny orinasam-panjakana
21 Febroary- Torohevitra sy tricks mba hiasa miaraka amin'ny angon-drakitra. Torohevitra sy tranga hiasa amin'ny Data demografika
Febroary 27 - Famolavolana haingam-pandeha ho an'ny tetezina avo lenta: OpenBridge Designer, Bentley BIM. Design High Speed ​​for High Speed ​​Bridges: Designer OpenBridge, ao amin'ny BIM BIM Solutions
March 5 - Fametrahana ny fahitan'ny toerana ao amin'ny rindrambaiko web izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa. Ampidiriny ao amin'ny Internet ny fampahalalana hita ao amin'ny Internet izay mampivelatra ny traikefan'ny mpampiasa
Diaben'ny 13 - Seminera amin'ny Web: Fampiasana loharano misokatra ho an'ny GIS mba hampidirana ireo workflows sy ny CAD - 13 Martsa an'ny 2019. Webinar: Fampiasana GIS Open Source Fampidirana ny Workflows Geospatial sy CAD - Martsa 13th 2019
Previous Post«Previous Geotech + Dronetech: tokony tsy hahomby ianao
Next Post Ahoana no nahazoako ny zanako lahy avy any Venezoelà?manaraka »